Shiinaha Antminer T17 + 58THs warshad iyo soosaarayaasha | Tianqi
Daawaha: 58TH / s
Qaabka Lambar Algorithm algorithm
Tixraaca awoodda waxtarka darbiga @ 25 ℃, J / TH
Waxtarka awoodda darbiga @ 40 ℃, J / TH
Awooda darbiga, Watt (1-1)
Qalabka korantada ee korantada AC, Volt (1-2)
Qalabka korantada ee korantada AC, Amp (1-3)
Quwadda korantada geliya AC Frequency Range, Hz
298.2 * 178 * 304.3
Buuq, dBA @ 25 ℃ (2-3)
Max heerkulka Hawlgalka, ℃
Hore: Antminer S19 - 95THs
Xiga: Antminer T19 - 84THs
1. Qeexitaannada iyo macluumaadka kale ee Antminer T17 + waa sida ku xusan qaybta Guudmarka.
3. Fadlan si naxariis leh u fiirso in korontadu ay qayb ka tahay T17 +.
4. Fadlan si naxariis leh u fiirso in danab gelinta loo baahan yahay ee T17 + ay tahay 220V.
8. Fadlan halkan guji si aad u tixraacdo dhammaan shahaadooyinka alaabada. Fadlan cilmi baaris ku samee shuruudahaaga gaarka ah ee deegaanka ka hor intaadan ka iibsan Bitmain. Xaaladda dib u dhac kasta oo caado ah ama soo noqoshada shixnad sababtoo ah la'aanta shahaadada, Bitmain mas'uul kama noqon doonto.
9. Si loo hubiyo xaqiiqada, tayada sare iyo caymiska buuxa ee alaabada aad naga iibsato, Waxaan si xoog leh u soo jeedinaynaa inaad ka iibsato websaydhkayaga rasmiga ah (www.bitmain.com) anaguna waxaan kaligeen mas'uul ka noqon doonaa alaabada laga soo iibsado sarkaalkeena. degel Fadlan garwaaqso inaynaan haysan wax qaybiyaha saddexaad iyo kuwa wax iibiya oo idman gobol kasta ama waddan kasta. Uma oggolaan doonno inay badeecadeenna ku iibiyaan shaqsiyaad taleefan, emayl ama qaabab kale. Waxay noqon kartaa khiyaano haddii aad amarka siiso qof sheeganaya inuu yahay wakiilka rasmiga ah ee iibinta Bitmain ama u qaybiye email ama Skype ama degello kale oo aan ka ahayn degelkeena rasmiga ah (www.bitmain.com). Dhacdo kasta masuul kama noqon doono wixii khasaaro ama waxyeelo ah ee ka dhasha khiyaanooyinka dhinacyada saddexaad. Shuruudaha iyo shuruudaha alaabadayada iibinta ee ku taal bogga rasmiga ah ayaa ah nooca kaliya ee qasab ku ah mana ku dhici doonno dhacdo kasta oo la mid ah shuruudaha la doorbido ee ay bixiyaan qaybiyaha kale ee rukhsad iyo iibiye kale ah.
(1-1) Xaalad yar: 25 ° C, min J / TH, xashiish caadi ah
Xaaladda ugu badan: 40 ° C, max J / TH, max hashrate
(1-2) Digniin: Danab gelinta qaldan waxay u badan tahay inay waxyeelo u geysato macdanta
(1-3) Xaaladda nooca: Awoodda tixraaca min, danab caadi ah oo AC gal ah
Xaaladda ugu badan: awoodda ugu badan ee tixraaca, min AC danab gelinta
(2-1) Oo ay ku jiraan cabbirka PSU
(2-3) Xaaladda ugu badan: Fanku wuxuu ku hoosjiraa max RPM (wareega daqiiqad kasta).
1. BTC (Bitcoin), LTC (Litecoin), BCH (Bitcoin Cash), USDT (omni) iyo silig USD ayaa lagu aqbalay qaybtaan.
weelka antbox, weelka btc, weelka bitmain, crypto macdanta asic, weelka antminer-ka, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto",